८० हजार माथि पुग्यो सुनको मूल्य, अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड
फाल्गुन १२, २०७६, सोमबार
काठमाडौँ । साताको दाेस्राे दिन अर्थात साेमबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ। हिंजाे छापावाल सुन प्रतितोला ७८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकाेमा आज छापावाल सुन प्रतितोला ८० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवस...
काठमाडौँ । साताको छैठौँ दिन अर्थात शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोता ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ...
घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहाेस कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल एकक...
आजकाे विदेशी मुद्रा भाउः कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (आइतबार) पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ २१ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रिय...
पछिल्लो दुई दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य तोलाको रु ८०० ले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७२ हजार २०० निर्धारण गरेको छ । आइतबार प्रतितोला रु ७१ हजार ६०० मा खरिदबिक्री ...
काठमाडौँ। साताको चौथौ दिन अर्थात बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। आज छापावाल प्रतितोता ७२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ४ सय रु...
काठमाडौँ । आज (बुधबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल ...
आज मंगलबार हेर्नुहोस् कति छ सुनको मूल्य ?
काठमाडौँ। साताको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मूल्यमा कारोबार ...
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल...
घट्यो सुनको मूल्य,कति पुग्यो ?
काठमाडौँ। साताको दोस्रो दिन अर्थात सोमबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। आज छापावाल सुन २ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोता ७१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन...
बढ्यो यूरोको मूल्य, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (सोमबार) पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर छ भने केही देशको बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९ पैसा तोकेको छ। ...
बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ?
मंसिर १५, २०७६, आइतबार
काठमाडाैं । साताको पहिलो दिन सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४९ पैसा तथा बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ।त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रिदर १४...
आज सुन तोलामा कतिले बढ्यो ?
मंसिर १३, २०७६, शुक्रबार
स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७१ हजार ३०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७१ हजार निर्धारण गरेको छ । बिहीबार ...
बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहाेस कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (शुक्रबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल...
काठमाडौँमा आज कुन तरकारीको मूल्य कति ?(मूल्यसूचीसहित)
काठमाडौँ । काठमाडौँमा आज (शुक्रबार) तरकारीको भाउ घटबढ भएको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार प्याज, काउली, सिमी, लौका लगायत अधिकांश तरकारीको मूल्य घटबढ भएको हो। आज नेपाली ठूलो गोलभेडाको खुद्रा मूल्य...
घट्यो आज सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
मंसिर १२, २०७६, बिहिबार
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बिहीबार २ सय रुपियाँले घटेर प्रतितोला ७१ हजार रुपियामा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवस...
आज बुधबार गहना किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कति छ आजको मूल्य
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार सुनको मूल्य स्थिर छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो।&nbs...
खाताबाटै हराउन थाल्यो बैंकमा राखेको पैसा , फरक तरिकाले बैंक लुट्ने गिरोह सक्रिय ,केहि पक्राउ
काठमाडौँ । राजधानीका बैँकबाट खातावालहरुको रकम चोरी गर्ने नयाँ गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चेकमा किर्ते हस्ताक्षर गरी २० लाख चोरी गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा अन्जन बराल, मणि घिमिरे, सुवास बजगाइँ, ...
अब प्याज काट्दा होइन किन्दा आसु आउने , किलोको २५०! हेर्नुहोस अरु तरकारीको कति ?
काठमाडौँ । आज (बुधबार) काठमाडौँमा तरकारीको भाउ घटबढ भएको छ ।कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार प्याज, काउली, सिमी, लौका लगायतका तरकारीको मूल्य घटेको छ। आज नेपाली ठूलो गोलभेडाको खुद्रा मूल्य न्यूनत...
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ। आज छापावाल सुन ४ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोता ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रति...